Amazfit Pop: endrika, endri-javatra ary vidiny fandefasana | Androidsis
Huami dia nanjary iray amin'ireo fanovozan-kevitra lehibe indrindra momba ny fividianana smartwatch misy sandam-bola be. Ity mpiara-miasa Xiaomi ity (izy no miandraikitra ny famokarana smartwatches an'ny marika, ankoatry ny fianakavian'i Mi Band izay ankafiziny) dia manana katalaogy avo lenta. Ary izao ny Amazfit pop manatevin-daharana ny fety.
Marihina fa, toy ny fanaony tato ho ato, ny Amazfit Pop dia natolotra tany Shina ary tsy hiala amin'ny sisin-taniny. Fa tony izany, toy ny nitranga tamin'ny famantaranandro marani-tsaina hafa avy amin'ny mpanamboatra, na amin'ny ny Amazfit Band 5 anao, hiafara amin'ny fahatongavany eto amintsika.
1 Amazfit Pop: famolavolana sy fiasa
2 Daty sy famoahana ny daty
Amazfit Pop: famolavolana sy fiasa
Amin'ny ambaratonga hatsarana, dia mahita smartwatch iray izay manana fitoviana lehibe amin'ny Amazfit Bip, iray amin'ireo smartwach mora vidy avy amin'ny orinasa Huami. Amin'izany dia tsy maintsy ampiana vatana vita amin'ny polycarbonate isika amin'ny vidiny ambany. Mazava ho azy, na eo aza ny vidiny ambany, manana ny zavatra ilaina rehetra izy mba hihaonana amin'ny filan'ny mpampiasa mitady akanjo azo ampiasaina amin'ny vidiny lafo.
Ho an'ny vao manomboka, mirehareha ity maodely ity a Efijery toradroa 1.43 mirefy, mihoatra ny ampy hahitana ny fampandrenesana rehetra azonao. Izany dia tsy maintsy ampiana sensor marobe afaka manara-maso ny hetsika ara-batana ataonao. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria ity Amazfit Pop ity dia mirehareha maherin'ny 60 fanazaran-tena efa voaomana mialoha ao anatiny, ka na inona na inona fanatanjahantena ampiharinao dia hanara-maso ny dingana rehetra ataonao ity rindrambaiko mora vidy ity.
Amin'izany dia tsy maintsy ampiana sensor ho an'ny tahan'ny fo afaka manara-maso ny famononanao 24 ora isan'andro. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ity sensor ity ihany dia hahafahanao manery ny fahafahan'ny rafitra fanombanana ny fahasalamana PAI. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny Amazfit Pop dia mirehareha rafitra iray handrefesana ny saturation oxygen ao amin'ny ra amin'ny alalany SpO2 sensor
Ho fanajana ny Ny vidin'ny Amazfit Pop sy ny daty famotsorana, hamidin'ny mpanamboatra azy any Chine izany amin'ny 11 Novambra, andron'ny mpitovo. Miresaka momba ny iray amin'ireo daty izay avo indrindra ny habetsaky ny varotra izahay (tena mitovy amin'ny Zoma Mainty any Azia izany). Ary, na dia tsy fantatsika aza ny vidiny ofisialin'ilay fitaovana, dia mazava fa baomba fivarotana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Amazfit Pop, arak'izany ny smartwatch vaovao mora vidy avy any Huami
Ahoana ny fanatsarana ny feo Spotify amin'ny SpotiQ